३६ अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता, कुन क्षेत्रमा कति ? « Sansar News
३६ अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता, कुन क्षेत्रमा कति ?
२८ असार २०७७, आईतवार १९:३६
२८ असार, काठमाडौँ । उद्योग क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु ३६ अर्ब विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यही असार २१ गतेसम्म २१३ उद्योगमा रु ३५ अर्ब ९४ करोड विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।